Sekethwayo uwudoti 'wendoda' futhi nginesure ungumdlwenguli nombulali ongakabanjwa, lamagama akho ayokubuyela masunengane yentombazane mthakathi ndini.
Akukho okunye obungakhuluma ngakho ungakufaki ukubulawa kwenu nibe nibulawela ubundindwa. Bhala okwakhayo noma ubeke ipeni phansi ujoyine ipolitiki.
Sekethwayo · 4 months ago
Yesss gal kunjalo njer yingakho abantu besifazane befa ngaloluhlobo bengenacala namuntu
Shineh · 5 months ago
Waze washaya khona ntombii, futhi eyethoyizi lesbhamu yona angiythandi nj ngempela. Syabonga ngezeluleko zakho
@JabulieghLe · 6 months ago
mlukekimluh@gmai... · 9 months ago